K30 Pro 5G ကို Price-to-Performancer လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား?
K30 Pro 5G? ခုချိန်မှာ Xiaomi Fans တွေ များတယ်ပဲ ပြောပြော စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကို အသင့်တင့်ဆုံးစျေး နောက်တစ်နည်း တစ်နှစ်တစ်နှစ် ထွက်ထွက်နေတဲ့ Flagship Level စံချိန်ကို အကောင်းဆုံး စျေးနဲ့ ရိုက်ချနိုင်တာ Xiaomi မှာပဲ မြင်ဖူး၊ ကြားဖူးပါတယ်။
တခြား Brand တွေမှာလည်း ရှိကောင်းရှိမယ်လို့ ကျနော်ထင်ပေမယ့် ဒီတစ်ခါ ချိုးသွားတဲ့ အကွက်လေးကို သဘောကျမိတယ်။ စာရေးသူ ကိုယ်တိုင်လည်း Mi Fans မဟုတ်ပေမယ့် ဘယ်လိုပြောမလဲ တန်ဖိုးအရ ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဆိုရင် Top-notch Performer လို့ ကျနော်မြင်တယ်။
တစ်ဖက်က စာဖတ်သူတွေအမြင်မှာရော Redmi K30 Pro ကို ဘယ်လိုထင်မလဲ? ဘာလို့ တစ်ဖက်စောင်းနှင်း ပြောနေရတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို လေ့လာကြည့်လိုက်ရအောင်လားဗျာ။
Absolute Square Camera Design
K30 Pro ကို မြင်လိုက်တာနဲ့ ဒီဇိုင်းပိုင်းမှာ ကွဲထွက်နေတယ်၊ ဘယ်နေရာမှာ သိသာလဲဆိုရင် နောက်ဖက်က Camera Square Placement က K20 Pro နဲ့ လုံးဝ မတူသလို Square Setup မှာ ကင်မရာ ၄ လုံးကို တစ်တန်းထဲ Alignment လုပ်ခဲ့တဲ့ K30 ထက် ပိုမိုက်လာတယ်။
OnePlus7နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင် ဆိုပေမယ့် Camera Placement လုပ်သွားပုံက Cross-circled ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေတယ်။ စက်ဝိုင်းခွက်ထဲမှာပဲ ကင်မရာ ၂ လုံးတန်းပုံစံနဲ့ အပေါ်၊ အောက် ၂ လုံးစီ Horizontal ထည့်ပေးလိုက်တာက ကျနော့်အမြင်မှာတော့ ပိုလှလာတယ်
(Square Camera သုံးတဲ့ ဖုန်းတွေထဲမှာ ဒီဇိုင်းပိုင်း ပိုသပ်ရပ်ပြီး Unique ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်)
FullView Display is Back
Pop-up Selfie နဲ့ Punch-hole သုံးတဲ့ Display ၂ မျိုးမှာ ဘာပိုကြိုက်လဲ ပြောကြည့်။ Personally FullView ကို နှစ်သက်တယ်ဆိုပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း Pop-up Mechanism က Drawback ရှိတယ်။ အလှပ (For Show) အတွက်ဆိုရင်တော့ Punch-hole ထက် Stylish ဖြစ်တယ်။
K30 Pro မှာတော့ Dual Punch-hole တွေ မပါတော့ဘဲ Pop-up နဲ့ လာမယ်။ အသုံးပြုလာမယ့် Megapixel Count နဲ့ Detail အချက်လက်ကိုတော့ မသိရသေးပါဘူး။
ButaDeal Breaker
Refresh Rate နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ Mi Fans တွေ အားရလိမ့်မယ်မထင်။ 120Hz ပြေးနေတဲ့ K20 5G က Smooth Experience ပေးခဲ့ပေမယ့် Mi 10 Pro 5G ရဲ့ 90Hz တောင် မရှိပါဘူး။ Smartphone တွေရဲ့ Standard 60Hz သုံးထားမယ်လို့ပဲ သိထားရတဲ့အတွက် Flagship Counterpart ကနေ သွေဖီသွားသလိုပဲ။
ဒါပေမယ့် K30 Pro ကို 6.67” AMOLED Screen နဲ့ ရရှိနိုင်ပြီး HDR10+ Certified (800nits ထိ ထောက်ပံ့မယ်) Display ဖြစ်မယ်။
Specifications ပိုင်းမှာ K30 5G တုန်းကလိုပဲ 64MP Primary Shooter သုံးထားပြီးတော့ 8K Video ရိုက်နိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် 13MP Ultra-wide Lens နဲ့ 5MP Tele-lens ဖြစ်သွားတာက စွမ်းဆောင်ရည် ပိုကောင်းလာမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပြီး ToF Sensor တွေအစား 2MP Macro Lens ကိုပဲ သုံးထားပါသေးတယ်။
ဒေါ်လာ ၄၂၅ တန် ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် Snapdragon 865 SoC with 5G ၊ 6GB RAM နဲ့ 128GB Storage ထည့်ပေးလိုက်တာက တကယ့်ကို Performance သမားတွေအတွက် ကျေနပ်စရာပါ။ ဘာပဲသုံးသုံး 4,700 mAh (More than S20+) ကို 33W Fast Charging နဲ့ တွဲပေးတာလည်း မိုက်တယ်။
3.5mm Headphone Jack Port နဲ့ Wi-Fi6Standard ထည့်ပေးတာလည်း Flagship Counterpart အချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံတယ်။ နောက်ဆုံးတစ်ချက် မပါစဖူး IP53 Water Resistance ကို ထည့်ပြောသွားတာက မထူးဆန်းဘူးဆိုမယ့် သူ့ Price Level မှာ Strong ဖြစ်စေတယ်လို့ ကျနော် မြင်ပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ ပြောရရင်တော့ $425 ဆိုတာ $528 တန်ဖိုးရှိ Galaxy S20 Ultra တစ်လုံးရဲ့ Production Cost ကို မမီပါဘူး။ Marketing ကြေးအသာထားလိုက်ဦး 8GB RAM ၊ 256 GB Storage ပါတဲ့ Snapdragon 865 SoC ၊ 5G အဲနောက်ပြီးတော့ 6.67” AMOLED Display သုံးလို့ရတာနဲ့တင် တန်ပါတယ်။
Source: TheVerge ၊ Twitter